DEG DEG:- Dad badan oo reer miyi ah oo ku geeriyooday deegaanka Masuubiye ee gobolka Bay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dad badan oo reer miyi ah oo ku geeriyooday deegaanka Masuubiye ee gobolka Bay
Wararka haatan naga soo gaaraya deegaanka Masuubiye oo ku taalla inta u dhaxeeysa magaalooyinka Baydhabo iyo Awdiinle ayaa sheegaya in illaa 30 qof ay ku geeriyoodeen biyo sumeysan oo ay ka cabeen war-biyood halkaasi ku taalla.
Dadkaasi ayaa la sheegayaa inay u badnaayeen dad reer miyi oo xoolo dhaqato ah, waxaana la sheegayaa inay biyo ka cabeen war-biyood sumeysan, taas oo keentay inay u geeriyoodaan.
Sidoo kale, 20 qof kale ayaa la sheegayaa inay haatan xaaladooda caafimaad aad u liidato, kadib markii ay cabeen biyahaasi sumeysan.
Dadkaasi ayaa la sheegayaaa in la geeyn doonno isbitaalka magaalada Baydhabo, maadama degaanka Masuubiye aanu laheyn xarun caafimaad oo wax ka qaban kara xaaladda caafimaadeed oo ay dadkaasi la il-daran yihiin.
Dhinaca kale, mas’uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegay in dadkaasi ay u badan yihiin dad xoolo dhaqato ah, islamarkaana ay u geeriyoodeen biyo ay ka cabeen war-biyood oo ay Al-shabaab sun ku shubeen.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo dad reer miyi ah ay biyo sumeysan ugu geeriyoodaan gudaha dalka Soomaaliya, waxayna arrintaan walaac weyn ku abuurtay dadka inta badan isticmaala war-biyoodka ee ku nool deegaanka Masuubiye ee gobolka Bay.